Jiraattoonni Magaalaa Hawaasaa boordii Filannootti iyyata galfatan - BBC News Afaan Oromoo
Jiraattoonni Magaalaa Hawaasaa boordii Filannootti iyyata galfatan
Qaamni walabni mirgaafi bu'aa ummata magaalaa Hawaasaa eegsiisu danda'u qaamoolee hawaasa adda addaa keessaa akka ijaaramuuf iyyanni boordii filannootti dhiyaate.
BBC boordii filannoo biyyaalessaa irraa akka mirkanneefateetti, miseensi koree gaaffii uumata Magaalaa Hawaasaa qaama dhimmi ilaalatuuf dhiyeessuuf hundeeffame xalayaa gaaffii mana galmee boordichaatti galfateera.
Korichis miseensoota jaha kan hammate yoo ta'u, dhimmi Hawaasaa aanga'oota Sidaamaa qofatti osoo hin dhiifamiin boordiin filannoo mataansaa akka raawwachisuuf gaafachuuf koree dhaabbate ta'usaa BBC'tti himaniiru.
Iyyata harra korichi barreefamaan dhiyeesse irrattis qabxiiwwan filannoo shan kan kaa'ame yoo ta'u, ''Magaalaa Hawaasaa keessa namoota miliyoota tokko ta'an kan jiraatan yoo ta'u, sagaleen saanii haala dhagahamu qabaata,'' jechuun ibseera.
Mana maree motummaa Naannoo Ummattoota Kibbaatti gaaffii naannoo ta'u Sidaamaa murteessuuf baatii shan keessatti rifarandamiin akka gaggeefamu boordiin filannoo murteessuunsaa ni yaadatama.
gahee Boordiin Filannoo qaamoolee biraa irraa ni eegama jedhee kaa'e keessaa tokko manni maree naannoo Ummattoota Kibbaa motummaa naannichaa fi bulchiinsa godinichaa waliin mari'achuun magaalaa Hawaasaa ammaan tana teessuma naannichaa fi bulchiinsa godinaa ta'un tajaajilaa jiruu ni ilaala.
Kanaanis qabxiin rifarandamii naannoo ta'u Sidaamaa kan mirkanneessu yoo ta'u, Magaalattirratti garuu mirgaa qaamooleen lamaan qabaataniifi garaagarummaa yaadaafi gaaffiiwwan kanaan wal qabate ka'an haala itti deebiifamu irratti hojimaa qopheessuun boordichaatti akka dhiyeessan gaafateera.
''Paattiin naannoo bulchaa jiru mirgaafi bu'aa jiraattota magaalaa Hawaasaa eegsiisuuf dandeettii hinqabu'' kan jedhan dura taa'aan korichaa Obbo Taagala Maadeeboo, ''Aanga'oota naannichaas ta'ee qaamooleen bulchiinsa magaalichaa kan namootuma muraasaan qabamaniidha'' jedhu.
Akka dura taa'aan koree kun jedhaniitti, ''Eddoowwan akka pirezidaantiin naannichaa, itti gaafatamaan waajira pirezidaaantii, itti gaafatamaan dhimma kaabinee, gorsaan addaa pirezidaantii fakkaankan qabaman garee tokko qofaan waan ta'ef, bulchiinsa magaalaa Haawaas kan wal fakkaatu waan ta'eef carraa magaalatti ilaalchisee boordiin filannoo bulchiinsi godinichaa qofti qoratee akka dhiyeessu akka taasisu,'' jechuun gaaffii dhiyeessan.
Miseensoonni korichaa xalayicharratti akka caqasanitti ''aanga'oonni godinichaa heerra biyyatti bu'urreeffachuun gaaffii naannoo ta'u yoo dhiyeeffatu sochiileen dargaggootaa mirga jiraachu lammiilee daangeessan mullataniiru,'' jechuun yaaddoosaanii kaa'u.
haaluma kanaanis ALI Haggayya 11 bara 2011 irraa eegale magaaloota godina Sidaamaa garaa garaa keessatti barbadiinsi qabeenyaa fi ajjeechaa mullate hirisuu isaarratti yaadoo qaban dubbataniiru.
Kanaafuu boordiin filannoo carraa magalattii irratti murtee dabarsuu keessatti qaama sabaaf sablamilee addaa addaa irraa babahe ijaaruun haala walaba ta'een akka ofumaan ogganuuf, haala qoodiinsa qabeenyaa irrratti hirmaannaa isaanii haala qabuun akka murtee taasisuuf gaafataniiru.
Itti dabaluunis, heera mootummaa naannichaa keewwata 6 irratti magaalaan Hawaasaa kan ummattoonni hedduun keessa jiraatan ta'u ifatti taa'amee waan ta'eef itti waamamni magaalatti kan motummaa federaalaa akka ta'uuf gaafateera korichi.
Boordiin filannoo mana maree naannichaa qaama hundeeffamu waliin ta'uun haala qoodiinsa qabeenyaas ta'ee mirgoota jiran irratti akka kabachiisaniif gaafataniiru.
Boordii filanootiin alattis, komishinii mirga namoomaa, waajira MM, Mana maree federeshiinii fi midiyaalee adda addaatti galfachusaanii kan himan dura taa'aan korichaa, gaaffiinsaaniis deebii gaarii akka argatu abdii qabaachu ibsaniiru.